Soo Iibso Boorsooyinka Suumanka Suunka Safarka Ragga - Dhoofinta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Rugaha Roogga ee Ragga
$ 32.81 qiimaha joogtada ah $ 68.36
Color kaakiga Coffee Light madow madow
kaakiga Coffee Light madow madow
Boorsooyinka Suumanka Suunka Safarka Ragga - Khaki gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Item: Cuntooyinka Waayeelka
Gaariga Dabeecadda:94 cm
Length Item:24 cm
Tayo fiican! Shipping aad buu u dhakhso badnaa. Dukaankan runtii farxad ayuu iga tagay! :)
Tayo aad u wanaagsan. Aad baan u talinaynaa!
Tayada aad ufiican. Aad baad u mahadsantahay.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 61771.
dib u eegista 61771
Waraaqaha Afka ah ee Dib-u-buuxin kara USB-ga USB-ga ah
Waad ku mahadsan tahay bixinta degdegga ah (5 maalmood)! Si cad loo soo buuxiyay, oo aan waxyeelo lahayn. Xirmada waa sax. Sida hadhow wax loo qoro.
Si dhakhso leh ayuu u yimid
3 1 XNUMX Wireless istaag xeedho dhakhso leh Apple Watch / Airpods & Qalabka iPhone
shaqeeyaa oo umuuqdaa mid weyn, mahadsanid